AMDP ပါတီ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဝင်းထွဋ် (ခ) နိုင်မြဝင်း > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / AMDP ပါတီ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နိုင်ဝင်းထွဋ် (ခ) နိုင်မြဝင်း
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ January 14, 2017 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 2,034 Views
ဖြေ ။ ။ ကျနော် နဂိုလ်ကတည်းက နိုင်ငံရေး ဝါသနာပါတယ်၊ ၂၀၁၅ တုန်းကလည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်နေရာမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူ့းတယ်၊၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ပါတီက ၃ ယောက် အဆိုပြုထားတယ်၊ နောက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ပဲ လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ နှစ်ယောက်က ကျနော့်ကို ဆန္ဒပြုတယ်၊ ဒါကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်အရွေးခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် မြို့နယ်မှာ ပါတီကနေ ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးမှာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံနဲ့ဆို အခက်အခဲမရှိပါဘူး၊ နိုင်တာရှုံးတာ အပထားပေါ့လေ၊ လောလောဆယ် NGO အလုပ်မှာ ဝင်လုပ်နေလို့ အားလပ်ချိန်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲလောက်ကို သိပ်ပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူး၊ ပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကျနော့ကိုယ်စား စည်းရုံးပေးတာ များပါလိမ့်မယ်၊ ညပိုင်းကျမှ စည်းရုံးရေးဆင်းမယ်၊ နေ့ပိုင်းကျရင် NGO အလုပ်ကိုပဲ လုပ်သွားမယ်။
နိုင်ဝင်းထွဋ် (ခ) နိုင်မြဝင်း(MNA)
မေး ။ ။ တကယ်လို့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရရင် လူထုအတွက် ဘာတွေအကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားတာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ယုံကြည်မှုဆိုတာကတော့ အခုပြိုင်ဘက်က ၄ ယောက်ရှိတယ်လေ၊ ၄ ယောက်ကတော့ သူ့အရည်အချင်းနဲ့သူ ရှိနေကြတာပဲ၊ ပါတီတိုင်း ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတိုင်းဟာ နိုင်မယ် ယူဆလို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကတော့ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူကသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်၊ မွန်နှစ်ပါတီဖြစ်နေလို့ အားနည်းချက်နည်းနည်းတော့ ရှိမယ်၊ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီက အင်အားများပါတယ်၊ ဝန်ထမ်းဘဝမှာလည်း ရွာတိုင်း၊ရွာတိုင်းမှာ ဆည်မြောင်းလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထု သိတာများပါတယ်၊ ယခု NGO မှာအလုပ်လုပ်နေတော့ ဒေသခံတွေ ပိုပြီးသိတယ်၊ အဲဒါကတော့ ကျနော့ရဲ့ အားသာချက်ပဲပေါ့နော်။
မေး ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် လူထုနဲ့ ပြည်နယ်အတွက် ဘာတွေအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရင် အဓိက လုပ်ရမယ့် မဏ္ဍိုင်က ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ပြည်နယ်အတွက်၊ တစ်ခြားတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြုသွားဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်၊
ဖြေ ။ ။ ကျနော်က ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှာ အလုပ်လုပ်လာတယ်ဆိုတော့ လယ်သမားတွေရဲ့ အခက်အခဲကို ကာကွယ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့် ဆည်မြောင်းကိစ္စတွေဟာ ပြည်နယ်ကနေကျတဲ့ ရန်ပုံငွေလောက်ပဲလုပ်နေရတယ်၊ ရာနှုန်းပြည့်တော့ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မှလည်း ဥပဒေကြမ်း နဲ့ နည်းဥပဒေတွေ ထုတ်ပြီးမှ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှု နှင့် စီမံကာကွယ်မှုကို ခေတ်မီနည်းပညာအထောက်အကူတွေနဲ့ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်အောင် လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။
ဖြေ ။ ။ အဓိက ဦးစားပေး လုပ်သွားမှာက လယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို နံပါတ် ၁ အနေနဲ့ လုပ်သွားမယ်၊ လယ်သမားဘဝ မြှင့်တင်ပေးမှာက နည်းပညာပိုင်းကတော့ ဆည်မြောင်းကဏ္ဍ မြှင့်တင်ပေးချင်တယ်၊ ကျနော်တို့ ချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာ ဆည်ရေပေးဝေရေး ဧရိယာမဟုတ်တော့ လယ်ဧက တွေ ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတွေရှိတယ်၊ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကို ခေတ်မီတဲ့ တူးမြောင်းစနစ်နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တယ်၊ နောက်တစ်ခုက ပင်လယ်ဆားငန်ရေကြောင့် တာတံမံကျိုးပြီး စပါးတွေ ရေကြီးနစ်မြုပ်တာရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် တာတံမံတွေအခိုင်အမာ လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်၊ ၂ ချက်ကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမယ်။
မေး ။ ။ မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်ထဲကနေ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ ရှိလဲ?
ဖြေ ။ ။ မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မွန်၊ ကရင်၊ ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသား စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု တွေ မြှင့်တင်သွားမယ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ တစ်ချို့လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသေးတဲ့ မြို့နယ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်၊ အဲဒါကိုလည်း လုပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ဒေသခံလူထုအတွက်ကော ဘာတွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ စဉ်းစားထားပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ တကယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်သာ ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် မြို့နယ်က မွန်စာပေ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီတွေကို အနီးကပ် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားမယ်။
ဖြေ ။ ။ ၂၀၁၅ တုန်းကလို ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီလို့ အော်နေကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပြောင်းလဲသင့်သလောက်တော့ မပြောင်းလဲဘူး၊ မဲဆန္ဒရှင်အနေနဲ့ ဒီတစ်ခါ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါတီကို မကြည့်ဘဲနဲ့ မိမိချောင်းဆုံမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရာ ဖွံ့ဖြိုးကြောင်း (သို့) မွန်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးရာ ဖွံ့ဖြိုးကြောင်းကို အဓိက လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် လူကိုသာ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ကြပါလို့ မှာကြားချင်ပါတယ်။
အမည်- နိုင်ဝင်းထွဋ္ဋ် (ခ) နိုင်မြဝင်း
အလုပ်အကိုင်- နည်းပညာမှူး၊ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း)
ပညာအရည်အချင်း- A.G.T.I. (Civil Engineering)
မွေးသက္ကရာဇ် – ၇.၁၂.၁၉၅၆
မှတ်ပုံတင်အမှတ် – ၁၀/ ခဆန (နိုင်) ၁၂၉၆၈၆
အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ – အမှတ် (၁၁၉)၊ ရပ်ကွက် (၉)၊ ကမာမိုကျေးရွာ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်
ပါတီတာဝန် – မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီ၊ ဗဟိုကော်မတီဝင်
လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့်အလုပ်အကိုင် – ၁၉၈၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၉ ခုနှစ်ထိ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနတွင် ဒုတိယမြို့နယ်ဦးစီးမှူး (လုပ်ငန်းပြ)၊ ၁၉၉၀ မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်ထိ တည်ဆောက်ရေး (၅) တွင် ဒု- ဦးစီးမှူး၊ ၁၉၉၉ မှ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်ထိ ချောင်းဆုံမြို့နယ် နှင့် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှူး၊ ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်မှ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်ထိ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှူး၊ ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ ချောင်းဆုံမြို့နယ် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာမှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NGO) တွင် နည်းပညာမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
လူမှုရေး/ အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားခဲ့မှုများ (အကျဉ်း) – တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင် မွန်စာပေယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်းများ၊ စာပေလုပ်ငန်းများထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဝန်ထမ်းဘဝတွင် ဆည်မြောင်းများ တူးဖော်ခြင်း၊ တာတံမံများပြုပြင်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည်။
လက်ရှိငြိမ်းစားဘဝတွင် မွန်ပါတီကိုယ်စားပြု ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာတိုင်းတွင် လမ်းတံတားခင်းခြင်း၊ ကျေးရွာအသီးသီးရှိ မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူထုနှင့်အတူ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Previous ဖမ်းဆီးထားသည့်တရားမဝင်သစ်များ ပြန်လည်ရောင်းချမည်
Next မဟာရင်ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးအန္တိမအဂ္ဂဇျာပနပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်